Spielwarenmesse 2022: Asi chete online nekuda kweOmikron - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Jan 13, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, Nuremberg Toy Fair
Zvinogona kuitika nekukurumidza mazuva ano: Sezvo Spielwarenmesse eG inozivisa, iyo Nuremberg trade fair haizoitike yakamira muna Kukadzi. Icho chikonzero ndeye yazvino corona hutachiona mamiriro akatenderedza omicron musiyano. Nekudaro, chiitiko hachizodzimwa zvachose: iyo yedhijitari offshoot, iyo yakarongwa sechikamu chekutaridzika kwekutengeserana kwegore rino, icharamba iripo.
"Indasitiri yematoyi yanga ichitarisira chiitiko chayo chikuru chepasi rose mukutanga kwaFebruary," inoshuma kudaro Spielwarenmesse eG. Kuwedzera kwakasimba kweiyo Omikron mutsauko mumazuva mashoma apfuura uye kuwedzera kwakabatana kwekumisa kumira kwaizosiya murongi asina imwe sarudzo: iyo toy fair 2022 muNuremberg yakanzurwa. Sarudzo yakaitwa ne "moyo unorema". Neimwe nzira, varatidziri, nyanzvi vatengesi uye vamiriri venhau vanogona kusangana pa "Toy Fair Digital" chikuva.
Mamiriro ezvinhu akazara anowedzera kuipa: Omikron
"Takarwa zvakasimba kuti tibate chiitiko chechiso nechiso uye takatanga tawana rutsigiro rwakasimba kubva kumisika yematoyi yepasirese," anodaro Christian Ulrich, Mutauriri weBhodi reVatungamiriri veSpielwarenmesse eG. Huwandu hukuru hwevatengesi vasina network yekutengesa kune dzimwe nyika vakakumbira varongi muna Zvita kuti vachengetedze kutengeserana, izvo zvakakosha kune bhizinesi ravo rekunze, richienda.
Mumazuva mashomanana apfuura, mamiriro ezvinhu akazara akawedzera kuipa. Nekuda kwekuwedzera kwakasimba kweiyo omicron musiyano, mamiriro edenda achinja zvakanyanya. Mukupindura, varatidziri vazhinji vakadzima zvimiro zvavo, vaine hanya nezvehutano hwezvikwata zvavo. Nekuda kweizvozvo, kutarisisa kwakadzama kwemusika wepasi rose wematoyi, uko mutambo wematoyi wakamira sechiitiko chinotungamira pasi rose cheindasitiri, hauchawanikwi. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, hapasisina chero chengetedzo yekuronga nekuda kwekukanzurwa kwepamutemo, izvo zvinogoneka chero nguva.
"Tinodemba chisarudzo chedu uye tinoda kutenda munhu wose akatsigira kushandiswa kwekutengeserana kwechiso nechiso kusvika kumagumo," anosimbisa Christian Ulrich. A multifunctional platform inowanikwa kune vese varatidziri uye vashanyi: Nekuda kweSpielwarenmesse Digital, vane mukana wetiweki uye kuwana mafambiro azvino pazuva rekutanga refair.
Vashanyi vekutengesa vakatofanira kufuratira Nuremberg trade fair gore rapfuura. Mushure mekumisikidzwa, chiitiko ichi chaifanira kuitika se "Zhizha Edition" - asi hapana chakaitwa nezvazvo zvakapihwa mamiriro ehutachiona hwekorona. Pane kudaro, tariro dzese dzakaiswa pagore ra2022 uye zuva rekutanga kwaFebruary, asi zvakare zviitiko zvedenda zvakakanganisa varongi.
Nguva pfupi yadarika, Spielwarenmesse eG akaita zvinoshamisa Kutora kweFriedhelm Merz Verlag yakakonzera kunzwa: vanhu vanobva kuNuremberg vanga vari varidzi veInternational Game Days muEssen kubva pakutanga kwegore, asi hukuru hwepasirese hwevatengi hwemitambo yebhodhi huchiri kurongwa nechikwata chetsika. Dominique Metzler.
Schmidt Spiele 49351 Mataveni ari muTiefen Thal, zano remutambo, ... * 29,88 EUR tenga
Kare Schmidt Spiele: Mitsva yemhuri bhodhi mitambo muchirimo 2022
Inotevera Kufa Chiedza 2: Co-op modhi? Techland inopa mhinduro
Iyo Mists Pamusoro peCarcassonne: Mutambo unova mubatanidzwa uye unopenga
Cyberpunk 2077: Mavhidhiyo matsva anoratidza zvombo, hunhu nyaya uye bhendi Samurai
Funga zvikuru: ipa mitambo yebhodhi yeKisimusi